Global Voices teny Malagasy » Polisy “manam-pahaizana” momba ny lèse majesté ao amin’ny raharaha itsarana ny Prachatai · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Marsa 2019 3:24 GMT 1	 · Mpanoratra CJ Hinke Nandika Miranah
Sokajy: Thailandy, Mediam-bahoaka, GV Mpisolovava
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Septambra 2011)
Vahoaka mpanohana maro be no nanatrika ny fitsarana momba ny “lése majesté” an'i Chiranuch Premchaiporn, webmaster ao amin'ny tranokalam-baovao antserasera tsy miankina ao Thailandy, Prachatai, izay ao anatin'ny andro fahafito ao amin'ny Fitsarana Heloka Bevava ao Bangkok. Nisy mpitsara faharoa nanampy an'i Kampala Rungrat hajaina, mpitsara zokiolona omaly.
Polisy jeneraly, Suraphon Tuanphong, no vavolombelona voalohany androany tamin'ny raharaham-pitsarana. Nilaza tamin'ny fitsarana ity jeneraly ambony ity fa manam-pahaizana amin'ny famakiana “lése majesté” avy amin'ny fehezan-teny misy kaody ao amin'ny aterineto.
Sekretera lefitry ny vondron'asa Polisin'ny Mpanjaka Thailandey (Royal Thai Police) momba ny lèse majesté ity vavolombelona ity. Na dia tsy namonjy ny fivorian'ny vondrona momba ny Prachatai aza izy, dia natoky tena tamin'ny fisehoany tao amin'ny fitsarana.
Nilaza i Suraphon fa nanakiana an'i ‘Mama Blue Diamond’ nanatrika ny fandevenana mpanao fihetsiketsehana PAD izay maty nandritra ny fifandonana ara-politika ny iray tamin'ireo fanehoan-kevitra tao amin'ny tranonkalan'ny Prachatai niampangana an'i Chiranuch. Nolazainy fa namaritra mazava ny mpanjakavavy ny fanehoan-kevitra ary ny dikan'ny hoe “lapan'ny voninkazo” dia ny trano fonenan'ny mpanjaka, Chitralada, ary ny ‘Nai 04′ dia manondro ny Printsy, mpandova ny seza fiandrian'i Thailandy.
Noraisin'ilay polisy manamboninahitra ho “tsy mety” sy manevateva fianakavian'ny mpanjaka ireo teny miafina ireo. Nilaza izy fa ‘manana adidy hanenjika’ tranga toy izany ny polisy satria mety hitombo mora foana avy amin'ny herin'ny aterineto ny disadisa ara-politika. Na dia izany aza, tsy tao amin'ny Prachatai ihany ho hita ny fanehoan-kevitra tahaka izany fa ao amin'ireo tranonkala maro hafa ihany koa.
Ho valin'ny fanadihadiana ny olona arovana, niaiky ny jeneraly Suraphon fa tsy midika hoe niara-nanaiky ny fanehoan-kevitra tahaka izany ireo mpiserasera mampiasa ny Prachatai ary ary niteraka adihevitra be amin'ny lafiny tsara sy ratsy izy ireo. Na izany aza, tonga tamin'ny famintinana ny vondron'asan'ny polisy tamin'ny Desambra 2008 fa tokony henjehina noho ny fanehoan-keviny i “Bento”, tahaka izany koa ny Prachatai.
Na dia izany aza, tsy nahita fiarahamiasa teo amin'ny “Bento”, ilay mpaneho hevitra tokana henjehina, tsy nahomby, tamin'ny fanehoan-kevitra lèse majesté, sy Chiranuch, webmaster ao amin'ny Prachatai ny polisy. Nanaiky ilay mpijoro vavolombelona fa mety tsy nanoratra manokana ny fanehoan-kevitra ireo mpandefa fa mety naka tahaka tamin'ny loharanom-baovao hafa.
Nanamarika ihany koa i Suraphon fa nangataka imbetsaka ireo mpiseraseran'ny tranonkala Prachatai mba ho esorina ireo fanehoan-kevitra ireo ary nanaiky izany fangatahana izany ny tranonkala rehetra. Na izany aza, tsapany fa tsy maintsy tompon'andraikitra amin'ny votoaty toy izany ny webmaster.
Nanipika avy hatrany ilay mpitsara manan-kaja fa ‘mahafantatra ny rehetra fa manondro ny mpanjaka ireo teny miafina ireo. Saingy nanontany izy raha tena manevateva tokoa ilay fanehoan-kevitra ary tompon'andraikitra ho azy ireo ihany koa ny webmaster.
Nolavin'ny mpitsara ny mpijoro vavolombelona faharoa avy amin'ny mpitory, dia ny sekretera vaovaon'ny vondron'asan'ny polisy momba ny lése majeste, nilaza fa tsy voatery ny fitsarana hihaino ny olona tsirairay niasa tamin'ny raharaha Prachatai.
Satria mivoatra ny raharaham-pitsarana, dia tokony hotadidintsika fa misy mpanao gazety be herim-po miatrika 20 taona an-tranomaizina noho ny fanehoan-kevitra tsy avy aminy.
Miverina amin'ny herinandro manaraka i Chiranuch, amin'ny talata 6 septambra ao amin'ny Fitsarana heloka bevava ao Bangkok (San Aya) ao amin'ny Arabe Ratchadapisek akaikin'ny toby Lat Phrao MTR. Hotontosaina ao amin'ny efi-pitsarana 910 ny fitsarana saingy laharana faha-1167/2553 ny raharaha raha sendra miova ny efi-pitsarana.
Hohenoina amin'ny 6 sy 7, 8, 9, 20, 21 Septambra ireo vavolombelon'ny fampanoavana ary amin'ny 11, 12, 13, 14 ny an'ireo vavolombelon'ny fiarovana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/03/15/136085/